Diovy: Manafaha an'i Darodar amin'ny Google Analytics
Ny olana momba ny spam referrer dia nahitana endrika mampidi-doza tao anatin'ny volana vitsy, fa ny fifantohantsika dia ny hanaisotra an'i Darodar amin'ny Google Analytics. Maro ny fanoloran-kevitra noraisina tamin'ity lafiny ity, saingy tsy misy azo antoka ny azy ireo, ary tsy misy fitsipika napetraka mba hanesorana ireo spammers ghetto tanteraka. Max Bell, ilay Semalt Manager Success Manager, dia mampahatsiahy fa zava-dehibe ny mahatsiaro fa tsy tokony hitsidika ireo tranokalan'ireo ahiahiana amin'ny solosaina izay miseho amin'ny data Google Analytics.
Raha mifantoka amin'ny fizotran'ny tranokala ianao ary jereo ny angon-kevitra momba ny famerenana hahafantatra misimisy kokoa momba ireo domains izay mandray ny fifamoivoizana, dia mety ho hitanao fa ny sehatra iray manokana dia mampiseho ny endriny ao amin'ny lisitry ny referrer Google Analytics tsy tapaka. Io sehatra io matetika dia hita ao amin'ny lisitry ny tranonkala rehetra ao amin'ny Internet. Nanangana ny lohany tamin'ny taona 2014 i Darodar ary maro ireo tranonkala maro no nahita fitifirana tao amin'ny fitobakan'i Darodar tamin'ny febroary 2015. Tatỳ aoriana, ireo mpampiasa tranonkala dia nahitam-bidy sy avo latsa-danja tao amin'ny vohikalany, nanimba zavatra maro tao amin'ny aterineto.
Tokony hotadidinao fa tokony hesorina tsy ho ela araka izay azo atao i Darodar, satria mety hanova ny antontan-kevitra momba ny analytics ho an'ny tranonkalanao. Na izany aza, afaka manitsy ny fanovana ao amin'ny kaontinao Google Analytics ianao. Azo antoka ny hiteny fa lasa be ny sariohatra ara-panatanjahantena, ary eto dia hampianatra anao ny fomba hanatsarana ny antontan'isa momba ny analytics amin'ny fanampiana ny segondra sy ny sivana.
Ratsy ve i Darodar?
Darodar dia mendrika ho fandaharanasa fanadihadiana webmaster, saingy maro amin'ireo mpanjifa no nanamarika fa tsy misy dikany ity serivisy ity. Na izany na tsy izany, Darodar dia ratsy ho an'ny tranonkalanao, satria ny fifamoivoizana dia spam referral fa handany ny fotoananao sy ny volanao izany
Ny mpamorona tranonkala sy mpitoraka bilaogy samihafa dia nanambara fa ny Darodar dia tsy mpandika teny tena izy fa tamba-jotra an-tserasera izay mety handrava ny tranokalanao amin'ny aterineto. Ny fifamoivoizana fantsona dia rehefa mijery ny rohy mankany amin'ny tranokalanao ny mpampiasa tranonkala iray ary tsy mitsidika ilay pejy. Ireo serveurs amin'ny tranonkala mifandraika dia mampiasa ny sehatra Referrer ao amin'ny HTTP Request mba hampahalala anao momba ny mpizara sy ny hetsika farany nataon'ireo mpitsidika.
Darodar ho toy ny loza
Raha tsy mahafantatra na inona na inona momba an'i Darodar ianao, andeha hofantarintsika fa ny Google Analytics dia hampiseho ny fitsidihanao hosoka sy ny taham-pifidianana avo lenta kokoa noho ianao. Ankoatra izany, ny faharetan'ny fivoriana sy ny isan'ireo pejy isaky ny fivoriana dia tsy mahatratra ny marika.
Ny endriky ny fifamoivoizana ao Darodar dia manana drafitra manan-danja telo:
Ny taham-pitenenana dia 100%, izay mety hampiakatra ny tahan'ny fialana amin'ny toerana misy anao.
Ny vanim-potoan'ny fivoriana dia 0, izay afaka mampihena ny faharetan'ny fotoana fivoriana.
Ny fomba fijery tokana izay afaka mampihena ny salan'isa najiana isaky ny fivoriana.
Esory ny Darodar sy ireo mpampiasa hafa avy amin'ny Google Analytics
Tsy maintsy manafoana ny Darodar ianao, ary ireo mpampiasa hafa avy ao amin'ny Google Analytics dia mandefa haingana araka izay tratra. Ny fomba voalohany sy mora indrindra dia mamorona fomba fijery vaovao alohan'ny hampiharana ireo sivana. Rehefa manova ny angon-drakitra nasehon'ny Google Analytics ny sivana amin'ny sehatra dia tokony hitazona fomba fijery iray momba ny fifamoivoizana ianao ary tokony hamorona fomba fijery vaovao miaraka amin'ireo sivana rehetra ampiasaina. Azonao atao koa ny manaisotra ny fitohanana an'i Darodar amin'ny fanampiana ny filalaovana. Google Analytics View Filtra dia fitaovana mahery vaika amin'ny fanivanana ny angona. Zava-dehibe ny mamantatra ireo sehatra izay tratran'ny fifamoivoizana tao Darodar. Tokony hanohy hanara-maso ny kalitao amin'ny tranokala ianao ary hanao fanitsiana mifanaraka amin'izany Source .